Walaalaha Wabiga Iyo Buuraha Ka Tallaaba Si Ay School U Tagaaan | WAJAALE NEWS
Walaalaha Wabiga Iyo Buuraha Ka Tallaaba Si Ay School U Tagaaan
October 12, 2017 - Written by Reporter:
Subixii marka ay hurdada ka kacaan oo ay wajiga maydhaan waxa ay isku maaweeliyaan kaftan iyo qosol , balse hawsha hortaala ma ahan mid ciyaar ah.
Gabdhahan oo kala ah 14 jir iyo 16 jir ayaa waxa ay kamid yihiin lix caruur ah oo safar dheer maalin kasta u taga iskuulka maalin kasta.
Qeybta ugu daran ee safarka waa marka ay gudbayaan wabiga Bhagirathi , halkaas oo ay kala tallaabaan wiish ka samaysan xadhko iyo biro la dhexgalo.
Waa shaqo u baahan xoog iyo tamar badan, sababtoo ah waa in ay iyaga jiidaan xadhigga si wiishka uu u socdo, mararka uu roobka jiro xadhigga waa ka culusyahay mararka kale, waxaana soo gaadha dhaawac.
Gabdhahan waxa kale ee walwalka ku haya ayaa ah dharka iskuulka oo midabkiisu cadyahay, iyo wiishka oo leh saliid madoow oo ay tahay in ay markasta ka illaaliyaan in ay dharku ka wasakhoobaan.
Duurka baaxadda leh ee ay sii dhexmaraan ayaa isagana u keeni kara halis kale oo kaga imanaysa duurjoogta sida shabeelka.
Inta badan tuulooyinkan ma laha wax waddo ah oo gasha, qaarkood oo yar ayaa leh waddo loo maro .
Marka ay iskuulka usii socdaan waxa ay biyaha ka cabbaan durdurada. Sidoo kale marka ay fasaxa leeyihiin waxa ay deegaankan qurxoon ku ciyaaraan heesaha aflaamta Bollywood-ka iyaga oo jilaya atariishooyinka caanka ah oo kale.
Gurigooda ma laha TV, balse guriga adeerkood ayuu mid u yaalaa, mararka qaarna dadka oo dhan ayaa Tv-ga hor fadhiista si ay u daawdaan.
Caruurta tuuladan ku nool waxa ay iskuulka kaga hadhaan sanadka 9aad, haddii ay tahay in ay waxbarashada sii wataan waa in ay halkan ka tagaan oo ay aadaan magaalooyinka waaweyn.